Wararka Maanta: Sabti, Oct 23, 2021-Raysal wasaaraha Soomaaliya oo Bashiir Goobe xil cusub u magacaabay
"Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa wareegto uu soo saaray maanta oo ay taarrikhdu tahay 23//10/2021 ugu magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac (Goobbe) Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Howlaha Guud iyo dib u dhiska, isagoo u rajeeyay in uu xilkiisa Eebbe u fududeeyo". ayuu yidhi Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahin Macalimuu.
Magacaabidda Bashiir Goobe, ayaa qeyb ka ahayd qodobadii dhawaan kasoo baxay is-afgaradkii madaxweyne Farmaajo iyo raysal wasaare Rooble ka gaareen khilaaf siyaasadeed ee ka dhex taagnaa.
Bashiir Goobe ayaa laga qaaday xilkii taliyaha nabad sugida ee uu raysal wasaaruhu u magacaabay, kadib markii uu xilkaas ka qaaday Fahad Yaasiin.
Xilka maanta loo magacaabay Bashiir Goobe, waxaa bishii january ee sannadkii 2020 iska casilay madaxwyene Qoorqoor, ka hor inta aan loo dooran xilka madaxweynaha Galmudug.